Inkampani yaseMexico iKyoto isungula eyayo ithebhulethi ye-Android | I-Androidsis
Ngaba umntu uza kuhlala ngaphandle komnyhadala Iipilisi ze-Android? Okwangoku, kubonakala ngathi akukho mntu ufuna ukuyeka ukuzama isahlulo, okanye ubuncinci iimvuthuluka zekhekhe. Kule meko, siza kukuxelela ngenye inkampani engadumanga kangako kwihlabathi liphela, ukuba ichaneke ngakumbi. Kyoto, de Mekhsikho, Ogqibe kwelokuba azame ithamsanqa kwihlabathi le Iipilisi ze-Android.
KyotoInkampani ezinikele kwimveliso yezixhobo, isungule Icwecwe M902, kwaye zingathengwa ezivenkileni izihlangu zexabiso Ngexabiso lama-2 300 eepesos zaseMexico (ngaphantsi kwama-euro angama-135). Njengoko sisazi ukuba sinabafundi abaninzi baseMexico, asifuni ukuyeka ukubazisa ngale mveliso intsha kwaye sibaxelele ukuba zeziphi ezona mpawu zibalulekileyo.
Kwakhona, njengoko kusenzeka kwi- EspañaKulungile kakhulu ukuba iinkampani zikazwelonke zibonelele ngeemveliso zazo ukuze kungabikho yonke into ethintelwe kunikezelo lwangaphandle kubavelisi abakhulu, abahlala bethengisa izixhobo zabo ngamaxabiso aphezulu kakhulu.
El Ithebhulethi yaseKyoto M902 ifakwe Android 2.1 kwaye ine-7-intshi yesikrini sokuchukumisa ubungakanani. Ukongeza, i-terminal inememori ye-4GB yangaphakathi ye-flash, enokwandiswa ukuya kuthi ga kwi-16 GB ngamakhadi e-MicroSD.
Kwelinye icala, i ipilisi iqulethe iindlela ezimfutshane kwezona zicelo zikaGoogle zidumileyo (ezinje ngeMaphu zikaGoogle), kwi I-Android Market nakwiintanethi zonxibelelwano ezinjengeFacebook neTwitter.
El Icwecwe M902 inikezela abasebenzisi bayo ngoqhagamshelo lwe-Intanethi ngeWi-Fi, kunye nezibuko le-USB kunye nezibuko le-HDMI. Okokugqibela, ibandakanya isidlali seMP3 kunye nevidiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Inkampani yaseMexico iKyoto isungula eyayo ithebhulethi ye-Android
Molo, njengeMexico ndonwabile ukuba inkampani yalapha ingena kweli lizwe lilwa nezixhobo, kwaye mhlawumbi ngumthengi onokubakho. Kodwa kuya kuba lula okanye kube nzima kangakanani ukuphucula ithebhulethi iye kwi-2.2 okanye ngaphezulu? xa ufumana kuphela uhlaziyo lwezixhobo ezithandwa kakhulu kwihlabathi. Ngaphandle kwabantu baseMexico, ngaba omnye umntu uya kuba nomdla kule thebhulethi ngomnqweno wokuyincothula, ayibengezelele kunye nabanye okanye iya kuncitshiswa kuloo marike kuba luphawu lwaseMexico?
Ke ndiyabuza, ukuba kuya kuba lula ukuthenga le thebhulethi okanye ngcono ibedume (umnyele okanye i-xoom)?
Ndiza kukunika olwam uluvo uEnrique: Ukuba ufuna ukuthenga ithebhulethi ukonwabela iindlela zayo eziqhelekileyo, oko kukuthi, ezo zikunikeza le nkampani yaseMexico zanele wena.
Ngokuchasene noko, ukuba ufuna ukuhlala usexesheni kunye neenguqulelo zamva ze-android, ndincoma ukuba uthenge enye oyikhankanyileyo, nokuba yi-xoom okanye ithebhu entsha ye-10.1-intshi kwaye ukuba uza kukhama yiyo, ungoyiki ukuhlawula umzekelo i-euro ezingama-425 ukufumana i-xoom, kuba iya kuba kukuthenga okuhle!
Ndiyathemba ukuba ndikuphendule. Konke okugqibelele!
Ingaba ibiza malini
Umdlalo weGuerrilla Bob uza kwi-Android